Galmudug oo ka aamusan go’aankii barlmaanka, Qoorqoor oo ay haysato 2 daran mid dooro & wasiir Fiqi oo hadlay.
April 13, 2021 Xuseen 0
Habeenimadii xalay waxaa la soo saaray war-saxaafadeed la sheegay inuu ka soo baxay dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir oo taageero u muujiyey go’aankii shalay golaha shacabku muddo kordhinta ku sameeyeen.
Kadib markii ay soo bexeen wararkaasi, waxaa durbadiiba beeniyey wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in warqaddaasi ay tahay mid been abuur ah isla markaana aysan Galmudug taageerin go’aamadii golaha shacabka Soomaaliya.
Muddo kooban kadib waxaa warka si rasmi ah loogu faafiyey xafiisyada warfaafinta dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Gobolka Banaadir inkasto aan ilaa hadda lagu baahin xafiiska warfaafinta madaxtooyada Galmudug & hay’adaha kale ee dowliga ah ee maamulka Galmudug.
Maalin kahor madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inuusan raali ka ahayn isla markaana taageeri doonin muddo kordhin ay golaha shacabku u sameeyaan dhammaan hay’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya, lamana oga qaabka uu hadalkaasi uga laaban karo.
Qoorqoor haddii uu qaadoco go’aanka barlamaanka wuxuu ka bixi doonaan gacanta madaxda dowladda federalka ah ee Soomaaliya, waxaana taasi bedelkeeda haddii uu taageero uu burin doonaa waraysigii uu ku sheegay inuusan raali ka noqon doonin muddo kordhinta dowladda Soomaaliya.